Windows 95 yeGnu / Linux ikozvino yavapo | Linux Vakapindwa muropa
Zvinogona kutaridza senge kuseka kana nyasha kubva kune imwe LxA mupepeti, asi chokwadi ndechekuti ichokwadi: Windows 95 yave kuwanikwa yeGnu / Linux.
Joker kana Windows 95 mudiwa, ini handina chokwadi, yakashandisa tekinoroji yeElectron kuunza system yeBill Gates muapp iyo yatinogona kuisa pane chero inoshanda system, kwete chete paMacOS asiwo pane chero Gnu / Linux kugovera.
Iyo kodhi yemahara, yemahara sezvinobvira, uye tinogona kuiwana kuburikidza neGithub repository yemusiki, Felix Rieseberg. Iyo pasuru ye Windows 95 haigare zvinopfuura zana mb, chimwe chinhu chingashamisa vechidiki vazhinji asi chokwadi ndechekuti iyi sisitimu yekushandisa yakagoverwa pamafloppy disks kwete pamaCD-ROM disks.
Iyo Windows 95 inoshanda sisitimu izere uye tinogona kushandisa kurangarira mashandiro ezvimwe zvirongwa vanga vari paWindows 95 kana kungo mhanyisa chekare MS-Dos uye Windows 95 mafomu atichiri kuda nezvikonzero zvakasiyana.
Ichowo chikumbiro chikuru chekunakidzwa uye kuseka, zvirinani kune avo vasina kutsigira kana vasina kunakidzwa neiyi sisitimu inoshanda. Kuiswa kweWindows 95 kuri nyore nekuti tinogona kubva iyo github repository kubva kunogadzira - tora iyo deb package kana iyo rpm package, zvinoenderana nekugovera kwedu uye nekuiisa kubva pane ino yekuisa package. Kuisirwa kuri nyore uye hakudi maraibhurari epfuma kuti ishande nemazvo sezvaungaona.
Ini pachangu ndinofunga zvinopesana kuti zvakadii kubvira kwete kare kare Windows 10 yakatsigira kugoverwa kweGnu / Linux uye yakabvumidzwa kuisa kubva kuchitoro chayo Uye ikozvino ndiyo imwe nzira kutenderedza, kubva kuGnu / Linux chitoro (mune iri kure kure ramangwana) tichakwanisa kuisa Windows 95. Kunyangwe ini ndichimirira Windows 98 kuti ibude, vhezheni inonakidza yeGnu / Linux desktops kunyangwe isiri yakanaka seKDE kana Gnome.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Windows 95 yeGnu / Linux ikozvino yavapo
Diego Usia akadaro
Hazvina musoro? Kwete isingasviki pane WSL!
Pindura Diego Usía
Nhau dzinonakidza. Kugadziriswa kwechipiri:
- "Code iri yemahara, yemahara sezvinobvira." Hazvishamise, iyo Windows 95 kodhi ndiyo chivakwa cheMicrosoft uye icharamba yakadaro kutoti Microsoft pachayo yaiburitsa.
- "Iyo Windows 95 inoshanda sisitimu" kukanganisa kwakajairika, zvekuti kunyange Wikipedia pachayo inoigadzira. Windows 95 yanga isiri sisitimu inoshanda, raive desktop raimhanya pamusoro peiyo MS-DOS inoshanda sisitimu
@Ignacio: Uchifunga mupfungwa dzako kuti MS-DOS yakashanda mumodhi chaiyo isina Global Descriptor Tafura, isina manejimendi ebasa padanho reprosesa, isina zvindori zvekuchengetedza, isina I / O yekudzivirira yekuwana, nezvimwe ... ndokutanga kubata zvese izvo zvinhu, yaive Anoshanda Sisitimu. Iyo yakakwanisa ndangariro, I / O uye kuwana kune zvishandiso, nguva, yakagovaniswa ndangariro, kuitwa kwemaitiro mune chaiyo mode, uye zvakare yaive ne graphical interface.
Chimwe chinhu ndechekuti zvaida kuti MS-DOS itange kutakurwa kutanga, asi zvakauya kuzoitira kushomeka kweMS-DOS pane makumi matatu nemaviri-ma processor mune yakadzivirirwa modhi, kana kuti iko kuchengetedzeka kwaive kusiri kwechokwadi (kwakaitwa mu NT uye Win32 yakaburitsa API kwaida kuchengetedzwa kweparameter izvo zvandakazorega).
KDE Neon Pinebook remix Edition ikozvino inotsigira 64-bit ARM malaptop